ज्याला माग्दा महिला श्रमीक उपर हिंसा
काठमाण्डौ १५ बैशाख । मनोरन्जन क्षेत्रमा भैरहेको श्रम शोषणको विरुद्ध सरकारले नै कडा कदम चाल्नु पर्ने मनोरन्जन क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक महिलाहरुले बताएका छन् ।
उपमहानगर प्रमुखले सार्वजनीक पोखरीमा झण्डा गाडे
वीरगन्ज, ११ बैशाख । राजनीतिमा अन्य कसैको जग्गा जमिनमा झण्डा गाडेर कब्जा गरेको घोषणा गरिने अभ्यास एकताका खुबै चलेको थियो ।
कोहडीमा टोलबिकास संस्था गठन
वीरगन्ज, १० बैशाख पर्साको साविक उदयपुरघुर्मी गाविस हालको वीरगन्ज उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर २७ मा स्थानीयको सहभागीतामा दुईवटा टोल विकास संस्था गठन भएको छ ।
६ महिला सहित ७७ जनाले गरे रक्तदान
वीरगंज ९ बैशाख । दुर्गा पुजा सेवा समिति रानीघाटले सातौ पटक रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ ।
जनजाती प्राथमिक बिद्यलयमा पोषाक बितरण
बीरगंज ८ बैशाख ÷ बीरगंजमा रहेको रहेको जनजाती बिद्यालयमा अध्ययन गर्ने १२५ जना छात्र तथा छात्राहरुलाई पोषाक बितरण गरिएको छ ।
बिद्यालयमा मुस्कान सहित बिद्यार्थीको स्वागत
बीरगंज ३ बैशाख ।बाल विकासदेखि कक्षा १० सम्मका बालबालिकालाई स्कुलमा मुस्कान सहित विद्यार्थी स्वागत तथा विद्यार्थी भर्ना तथा विद्यार्थी टिकाउ अभियान शुरु भएको छ ।
माझीको उपचारमा आर्थिक सहयोग जुटदै
एबडोमिनल एब्सट्रक्सनबाट पीडित भई उपचार गराई रहेका सिकेन्द्र माझिलाई आर्थीक सहयोग प्राप्त भइरहेको छ ।
जीतपुर खुल्ला दिशामुक्त घोषणाको तयारीमा
सुवर्णपुर १२ चैत । पर्साको जीतपुर गाउँ बिकास समिति खुल्ला दिशा मुक्त गाउँ बिकास समिति हुने तैयारी अन्तिम चरण मा पुगेको छ। डिवास सीसीले आज गरेको अनुगमनको क्रममा खुल्ला दिशा मुक्त घोषणाको तैयारी अन्तिम चरणमा पुगेको पाइएको हो।
डोमवस्तीमा स्वास्थ्य शिविर रोगीको निशुल्क उपचार गरिने
बीरगंज १२ चैत, पहलको पहलमा आज बीरगंजको सुख्खाबन्दरगाह आर्दशचोमा रहेको डोम बस्तीको ११ घरधुरी का १२ महीला १३ पुरुष गरी २५ जनाको स्वास्थ्य परीक्षण भएको छ ।
वीरगञ्ज, १० चेत, वीरगञ्ज पब्लिक कलेजले आज वीरगञ्जको होटल भिस्वामा विशष्ो कार्यक्रम आयोजना गरि कक्षा १२ का विधाथीहरुलाई बिदाई गरेको छ ।
श्रीराम कथाको तयारी पुरा, रुँगटा वेलफेयर धार्मिक कार्यमा
बीरगंज ९ चैत ÷ यहाँको प्रतिष्ठित औद्योगिक घरना मुरलीधर रुँगटा समुहले चैत महिनाको १६ गतेदेखि २३ गतेसम्म साताब्यापी श्रीराम कथा वाचन मार्फत धार्मिक कार्यको थालनी गर्न लागेको जनाएको छ ।
श्रीमद्भागवतमा अहिलेसम्म करिव ५० लाख रकम संकलन
जीतपुर ६ चैत । जितपुर–सिमरा उप–महानगरपालिकाको बडहर्वामा जारि श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञमा अहिलेसम्म करिव ५० लाख रकम संकलन भएको छ । आयोजक श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ मुल आयोजक समितिका सह–संयोजक बसन्त खतिवडाका अनुसार १ कठ्ठा जमिन सहित आजसम्म करिव ५० लाख रकम संकलन भएको हो । ७ दिनसम्म चल्ने श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञमा पंण्डित दिनबन्धु पोखरेलले कथा बाचन गरेका छन । सप्ताहलाई व्यवस्थित बनाउन ३ सय ५१ सदस्यि मुल आयोजक समिति गठन गरिएको छ ।
सहयोग जुटाउदै पहल
क्यानडामा रहदै आएका वीरगन्ज १४ का सृजन चौरसियाले छपकैयामा रहेको अनाथलय ( यतिमखाना) का बालकहरुलाई खाद्यान्न सहयोग गरेका छन । वीरगन्जको पहल नामक संस्थाको सक्रियतामा क्यानडाबाट सृजनले पठाएको ८ हजार ५ सय बराबरको तीन बोरा चामल, एक बोरा दाल, एक एक बोरा प्याज र आलु एक कार्टुन खानेतेल यतिमखानालाई सहयोग गरिएको हो । पहलको समन्वयमा सृजनकी बहिनी ज्योती चौरसिया र ज्वाई संदीप चौरसियाले यतिमखानाका मौलाना अलि असगर मदनीलाई खाद्यान्न हस्तान्तरण गरेको पहलका अध्यक्ष दिलिपराज कार्कीले बताए । खाद्यान्न हस्तान्तरण कार्यक्रममा पहलका सहसचिव रजनिश कुमार कलवार यतिमखानाका बालकहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
शौचालय हुनेलाई रातो टिका
जीतपुर ५ चैत्र । बाराको गढीमाई नगरपालिका वडा नम्बर ४ औराहाको चौधरी टोल र मेहतो टोलमा आज खुला दिसामुक्त अभियान अन्तर्गत स्थानीयरुको भेला तथा घरदैलो कार्यक्र सम्पन्न भएको छ । वातावरण तथा जनस्वास्थ्य संस्था (एन्फो), नगर स्तरीय खानेपानी तथा सरसफाई स्वच्छता समन्वय समिति र टोल सुधार समितिको संयुक्त आयोजनामा घरदैलो कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो । कार्यक्रममा चर्पीको महत्वको बारेमा जनचेतनामूलक जानकारी गराइएको एन्फोका आर्थिक तथा प्रशासन सहायक अधिकृत अजयलाल नकर्मीले बताए । कार्यक्रममा एन्फोका जिल्ला संयोजक केदार कोईरालाले सरसफाई सम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
छात्रावासमा होली समाग्री तथा फलफुल बितरण
वीरगंज २८फागुन हिन्दुहरुको महान पर्व होलीको अवसरमा द राइजिङ्ग नेपाल वीरगंजले आज आमाको माया छात्रावासमा होली समाग्री तथा फलफुल बितरण कार्यक्रम गरेको छ । क्लबका अध्यक्ष पंकज पटेलको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रमले छात्रावासमा रहेका १८ जना बालबालिकाहरुलाई अबिर, रंग , कपडा, मिठाई, फलफुल लगायतको समाग्री बितरण गरेको थियो । वीरगंज वडा नं। १३ आर्दशनगर आमाको माया छात्रावासको सभाहलमा सम्पन्न समाजसेवी भवरलाल पारिक सदभावना पार्टीका वीरगंज नगर अध्यक्ष ओमप्रकास सर्राफ जनजाती कल्याण आश्रमका प्रेम थुलुङ्ग, लगायतकाले आ आफनो धारणा राखेका थिए ।
राउण्ड टेवलको आयोजनामा रक्तदान
बीरगंज २८ फाल्गुन । बीरगंज राउण्ड टेवलले आयोजना गरेको रक्तदान कार्यक्रममा ९ महिला सहित ७० जनाले रक्तदान गरेका छन । बीरगंजको टिवडेवाल धर्मशालामा कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो । बीरगंजका सबै राउण्ड टेवलको संयुक्त आयोजनामा रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गरिएको सुसान्त चाचानले बताउनु भयो । मानव शरीरका अन्य अंगहरु प्रत्यारोपण हुन सक्ने भएपनि रगतको बिकल्प रगत मात्र हुने भएकोले जीवन जोगाउन मद्धत मिलोस भनेर रक्तदान कार्यक्रमको आयोजना गरिएको ऋषि खेतानले बताउनु भयो ।
पर्खालले च्यापिएर एकको मृत्यु
वीरगन्ज ७ फागुन । बीरगंजमा ढल तथा नालाको निर्माण गर्ने क्रममा शनिबार बिहान पर्खाल भत्किएर खस्दा त्यसमा च्यापिएर एक जना कामदारको मृत्यु भएको छ । पर्खाल भत्किएर खस्दा त्यसमा च्यापिएर रौतहटको रमौली ४ का राम पुकार सहनीको घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो । अरु तीन जना कामदार गम्भिर घाइते भएका छन । एशीयाली विकास बैंक एडिबीको आर्थिक सहयोगमा वीरगन्जमा सन्चालित मझौला सहर एकीकृत सहरी वातावरणीय सुधार योजना अन्तर्गत ढल निर्माणकालागि खाल्डो खनिदा पर्खाल भत्किएको हो
युवाकालागि आइडल बन्दै रामनगरिका रमेश
वीरगंज ७ फागुन / पर्सा जिल्लाको रामनगरी गाविसका एक युवकको पहलले सप्तरीका ३ परिवारको घर बन्ने भएको छ । भारतबाट आफनो अध्ययन पुरा गरि फर्किएका पर्साको रामनगरिका युवा बीरगंजेली पत्रकारहरुसंग पहिलो पटक साक्षत्कार गर्दै घर बनाउने प्रेरणाको बारेमा जानकारी गराउदै थिए । सामाजिक कार्यमै जीवन बिताउने प्रण गरेका साहले बिकृति र बिसंगतीपूर्ण राजनीतिक भडकाव प्रति सामाजिक संजाल मार्फत कडा प्रहार गर्ने गर्छन ।
मदरसा अर्गनाइजेशनको साधारण सभा सम्पन्न
सात बूंदे प्रस्ताव पारित गर्दै मदरसा अर्गनाइजेशन अफ नेपालको प्रथम साधारण सभा एमईएस स्कुल बीरगंजको प्राङ्गणमा सम्पन्न भएको छ ।
वीरगंज, २१ माघ / पत्रकार एवं साहित्यकार गोपालचन्द्र गौतम (गोतामे)को स्मृतिमा स्थापित स्व. गोतामे पत्रकारिता पुरस्कार २०७३ पाल्पाका पत्रकार मेघराज शर्मालाई प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ । प्रतिष्ठानका अध्यक्ष जगदीशप्रसाद शर्माको अध्यक्षतामा आज बसेको बैठकले यस वर्षको स्व. गोपालचन्द्र गौतम पत्रकारिता पुरस्कार छैठौं संस्करण पत्रकार शर्मालाई प्रदान गर्ने निर्णय गरेको प्रतिष्ठानका कोषाध्यक्ष शत्रुघ्न नेपालले बताए ।